KYAW CHAN NYEIN: " ကျန်းမာရေးအတွက် ဆောင်ရန်နဲ့ရှောင်ရန်အချက်များ..."
ထို့ကြောင့် အသည်းတွင် တစ်ခုခုဖြစ်ပါက ကလီစာများတွင်လည်း
ကလီစာတွင် တစ်ခုခုဖြစ်လျှင် အသည်းတွင်လည်း
မည်သည့်နည်းနှင့်မှ မသိနိုင်ပါ ။
အသည်းသည် အရင်ဆုံး ပျက်စီးရသည် ။
ထို့ကြောင့် အသည်းကို သေသေချာချာ
၃. အသည်းသည် ကိုယ်ခန္ဓာ တစ်ခုလုံး၏ အဆိပ်အတောက်များကို ဖယ်ရှားပေးရသည် ။
ထို့ပြင် ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းရှိဗိုင်းရပ်(စ်)ပိုးများကိုလည်း တိုက်ခိုက်ရသည် ။
၄င်းကိုယ်တိုင်လည်း ဆားဗစ်စင် ပြန်လုပ်ရသည် ။
ထိုအချိန်သည် ၊ ည (၁၁) နာရီ
မှ မနက်စောစော (၃) နာရီ ကြားတွင် ဖြစ်သည် ။
ထို့ကြောင့် ည (၁၁) နာရီ နောက်ပိုင်းမှ
အိပ်ခြင်း ၊ ညစာကို နောက်ကျမှ စားခြင်းသည် အသည်းကို အားနည်းစေသည် ။
ထို့ပြင် မအိပ်ခင် (၂) နာရီ အတွင်း အသားနှင့် အဆီများ
စားခြင်းသည် အသည်းကို အားနည်းစေသည် ။
အသည်းသည် နားချိန်မရဘဲ အလုပ်လုပ်နေရသည်။
ညအိပ်ယာဝင်နောက်ကျသဖြင့် မနက်တွင် နေမြင့်သည်အထိ အိပ်စက်ခြင်း ၊
၆. အကယ်၍ ည အိပ်ယာဝင်ခါနီးတွင် ဗိုက်ဆာပါက ၊
အသီးအနှံ စားသုံးနိုင်ပါသည် ။
ထိုအစာများသည် အစာကျေလွယ်သည် ။
အသားသည် စားသုံးပြီး (၄)နာရီကြာမှ အူမကြီးသို့ ရောက်သည် ။
ချက်ထားပါက (၁၂)နာရီကြာမှ အူမကြီးထဲသို့ ရောက်သည် ။
ထို့ကြောင့် ည အိပ်ယာဝင်ခါနီးတွင် ထိုအရာများ မစားသုံးသင့်ပေ ။
အကယ်၍ စားသုံးမိပါက အသည်းသည်
ထို အဆိပ်အတောက်များ ကို ဖယ်ရှားနေရသောကြောင့် မနားရပေ ။
မနက်စောစော အိပ်ယာထစာတွင် ပင်ပန်းသည်ဟု
ခံစားရခြင်းမှာ အထက်ပါ အကြောင်းများ၏ရလာဒ်ဖြစ်သည် ။
ထို့ကြောင့် ည အိပ်ယာဝင်ခါနီးတွင် အသီးအနှံစားပါက
မနက် အိပ်ယာထတွင် အားအင်ပြည့်ဖြိုး လန်းဆန်းနေပါမည် ။
၇. အဆီသည် အသည်း၏ အဓိက ရန်သူဖြစ်သည် ။
အဆီသည် အသည်း၏ လုပ်ငန်းများကို ပျက်စီးစေပြီး
အသည်းကိုလည်း အားနည်းစေသည် ။
ငါးကလေးများသည် ၊ ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကောင်းမွန်သော အစာများဖြစ်သည် ။
နှမ်းဆီသည်လည်း ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ကောင်းမွန်သည် ။
ကြာဆံသည် အလျူမီနီယံ ဓါတ်ပါခြင်းကြောင့် မကောင်းပါ ။
ပိုးသတ်ဆေးနှင့်အရောင်ချွတ်ဆေးသည် အသည်းအတွက် မကောင်းပါ ။
ဆေးစားမှားခြင်းကြောင့်အသည်းကို ပျက်စီးစေသည် ။
မိုက်ခရိုဝေ့ မီးဖိုကရောင်ခြည်သည် ၊
အစားအစာတွင် ပါဝင်သော အာဟာရဓါတ်အားလုံးကို ပျက်စီးစေသည် ။
အသည်းအတွက် မကောင်းပါ ။
တရုတ်ဆေးများသည် ကျောက်ကပ်အတွက် မကောင်းပါ ။
၁၂. အကောင်းဆုံး အိပ်ချိန်သည် ည (၉) နာရီနှင့် (၁၁) နာရီကြားတွင် ဖြစ်သည် ။
များများအိပ်ခြင်းဖြင့် အသည်းကို ကောင်းမွန်စေသည် ။
နလံထစ လူနာများသည် အိပ်ရေးဝအောင် အိပ်ရသည် ။
၁၃. သဘာဝ အစားအစာများသည် အသည်းအတွက်ကောင်းမွန်သည် ။
စည်သွပ်ဗူးစားသုံးခြင်း ၊ စည်သွပ် အချိူရည်သောက်သုံးခြင်း များသည်
အာဟာရ မဖြစ်ပါ ။
ခန္ဓာကိုယ်ကို အားနည်းစေသည် ။
လူတစ်ယောက်၏အသည်းသည် မကျန်းမာပါက ထိုလူသည် ၊
သဘာဝအရ လေလည်ခြင်း ၊
ရေနွေးကန်တွင် စိမ်ခြင်းသည်လည်း ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းပါသည် ။
ရင်ဘတ်ကို မစိမ်မိပါစေနှင့် ။
အပူဓါတ်သည် နှလုံးပို၍ အလုပ်လုပ်စေသဖြင့် နှလုံးအတွက် မကောင်းပါ ။
ဖြစ်ရန် အလားအလာများသည် ။
ထို့ပြင် သွေးအုပ်စု အို အမျိုးအစားရှိသူများသည်
အသည်းရောဂါဖြစ်နိုင်ရန် အခွင့်အရေးများသည် ။
၁၉. မိန်းမများသည် ပို၍ အသက်ရှည်ကြသည် ။
၂၀. ၀သော သူများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် အစားအစာတရားလွန်စားကြသည့်အတွက်
အသည်း ၊ နှလုံးနှင့် အူလမ်းကြောင်းတွင် မကျန်းမမာဖြစ်တတ်သည် ။
နှလုံးကို ထိခိုက်လျှင် ပုံမှန်အားဖြင့် သွေးဖိအားလည်း
တစ်နေ့လျှင် ရေ (၂)
Reference : aungwinheinn.blogspot
၂၃. မလိုအပ်ဘဲ အိပ်စရေး (X-ray) ရိုက်ခြင်း၊
(C.T. Scan ) လုပ်ခြင်းတို့ကို မလုပ်ပါနှင့် ။
ကိုယ်ခန္ဓာကို ထိခိုက်စေပါသည် ။
ပုံမှန် ဆေးစစ်ခြင်းဖြင့် ကင်ဆာရောဂါနှင့် တခြားရောဂါများကို မသိနိုင်ပါ။
ပုံမှန် ဆေးစစ်၍ သိရသော အချိန်တွင် ၊ ရောဂါအများစုသည်ရောဂါရင့်နေကြပေပြီ ။
မည်သည့် ရောဂါဖြစ်စေ ခွဲစိတ်မည်ဆိုလျှင် ၊
အသည်းရောဂါဖြစ်လျှင် ၊ အင်္ဂလိပ်ဆေးမစားဘဲ သေချာစွာ
၂၅. နံနက်စောစော (၅) နာရီနှင့် (၇) နာရီ ကြားအချိန်သည်
မစင် စွန့်ခြင်းအတွက် အကောင်းဆုံးအချိန် ဖြစ်သည် ။
မစင်မှ အဆိပ်အတောက်ကို စုပ်ယူပေလိမ့်မည် ။
ထိုအကြောင်းများကြောင့် ၀မ်းချူပ်သူများ နေထိုင်မကောင်းကြခြင်းဖြစ်သည် ။
၂၆. သည်းခြေတွင် ကျောက်တည်ခြင်း ၊
အသားနှင့် အဆီမှ အဆိပ်အတောက်များကြောင့်
(ထန်းလျက် ၊ ဟင်းနုနွယ် ) စသည်တို့သည် ၊
သည်းခြေနှင့် ကျောက်ကပ်ကို သန်မာစေသည် ။
၂၉. အနီရောင်ရှိသော အသီးအရွက်များသည်
အ၀ါရောင် ရှိသော အသီးအရွက်များသည်
၃၁. မျက်နှာတွင် ၀က်ခြံ ထွက်ပေါ်လာခြင်းသည်
၃၃. ခေါင်းကိုက်ခြင်းသည် နှလုံးမှ သွေးများတွင်
အောက်ဆီဂျင် ပမာဏ နည်းပါးနေခြင်းကို
ပြသသော ရောဂါ လက္ခဏာ တစ်ရပ် ဖြစ်သည် ။
အားနည်းနေခြင်းကို ပြသည် ။
၃၅. ရင်သားနှင့် ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ ရှိသူများ
ကျန်းမာရေးအတွက် အာယုဒါန ပြုပါသည် ။
ဝေနေယျ သတ္တ၀ါ အားလုံး